Praia de Santa Maria: Cabo Verde ọhụụ ọhụrụ rutere
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Praia de Santa Maria: Cabo Verde ọhụụ ọhụrụ rutere
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Cabo Verde na -agbasa • News • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
'Praia de Santa Maria' si Boston rute n'ọdụ ụgbọ elu Nelson Mandela dị na Capem Verde n'abalị Fraịde gara aga bu ndị njem 134 n'ụgbọelu.
"Praia de Santa Maria", nke ndị njem ahụ họọrọ aha ya site na ntuli aka ọha na Facebook, nwere aha ya dị ka nsọpụrụ nye otu n'ime ihe ịtụnanya okike nke Cape Verde nke bụ osimiri a ma ama nke Santa Maria na agwaetiti Sal, ugbu a ehiwe nke ụgbọ elu.
Ejiri acha anụnụ anụnụ na pastel mara mma, akara ngosi ọhụrụ bụ ngwakọta dị nro nke ịma mma nke ihe ndị sitere n'okike na ụda nke ọdịbendị Cape Verdian, yana agba nke ụlọ ndị a hụrụ n'agwaetiti ndị ahụ.
Mpempe akwụkwọ agba nke ime na mpụta onyinyo nke ụgbọ elu ahụ na-egosi na mgbanwe na-esite n'ime, n'ọchịchọ ahụ ka mma ijere ndị ahịa ya ozi ma weta Cape Verde n'ụwa na ụwa na Cape Verde.
“Praia de Santa Maria” ga-enwe oche iri na abụọ n’ime ọnụ ụlọ adịchaghị elu yana oche 12 n’oche ebe a na-arụzi arụzi nwere ike idozi ma dịkwa mma.
Na mbata nke "Praia de Santa Maria", Cabo Verde Airlines atọ ụgbọ elu 757-200 ma na-ezube ịnata mmadụ abụọ ọzọ na njedebe nke afọ.
Nnata nke ụgbọ elu ahụ bụ akụkụ nke nhazigharị ụgbọ elu ahụ ebe ọ bụ na emechara atụmatụ nke ya na March 1st, 2019.